Indawo yokuNgena yaBucala yeeNdwendwe kwiBoulder Enhle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJennie
Igumbi leendwendwe elikumgangatho ofanelekileyo wegadi enocango lwangaphandle lwabucala; yeyakho yonke. Iyaphumla, ikhululekile, izolile kwaye ifanelekile ukuhlala kwakho.Yiza uhambe ngokuthanda kwakho ngesitshixo socango lwesitshixo. Ibekwe kwindawo esembindini ukuze ufike kwiindawo ekuyiwa kuzo kurhulumente.Yonwabela iBoulder nayo yonke into enayo. Sinikwe ilayisensi yokurenta ixesha elifutshane kwiSixeko saseBoulder.
Le yindlu yabucala ekumgangatho wegadi (isiseko) sekhaya lethu. Imigangatho yokhuni lonke kunye nethayile kwigumbi lokuhlambela.Vula imbono enegumbi lokuhlala elikhulu kubandakanya isofa, isitulo esisecaleni kunye nomabonwakude; igumbi lokutyela elinetafile nezitulo ezine.Igumbi elinye lokulala elinebhedi yobukhulu bokumkanikazi, ibhentshi yomthwalo wakho, iindawo zokulala ezimbini ezineedrowa ukuze ukhulule kwaye ukhululeke, iigwegwe ezinama-hangers kunye nesibuko esipheleleyo.Indawo ibonelela ngekhitshi (akukho sitovu) enefriji encinci, i-oven yetoaster, imicrowave, imbiza yekofu, iketile yombane, ikofu, iti kunye nezinye iziselo.Igumbi lokuhlambela ligcwele ukuhlamba umzimba, ishampu, i-conditioner, iblow-dryer, iitawuli, iayini kunye nebhodi yoku-ayina.Kukho i-cable TV, i-Apple TV, i-DVD player kunye ne-wireless yasimahla.
Silala 2 nangona kunjalo sinebhedi yomoya eyongezelelweyo $30.
4.94 · Izimvo eziyi-243
Sihlala kwindawo entle, ezolileyo kakhulu kwimizuzu embalwa ukusuka edolophini iBoulder kunye neCU. Kukho simahla kwindawo yokupaka isitalato ngaphesheya kwesitalato.Sihlala ngaphesheya kwesitrato ukusuka kwipaki entle ebonelela ngeendlela ezintle zokuhamba, iindledlana ezibalekayo kunye namachibi. Yimayile enye ukuya kwigrosari, iindawo zokutyela kunye neendawo ezithengisa utywala ezincinci.
Umbuki zindwendwe ngu- Jennie
Sikunika ubumfihlo bakho kwaye siyafumaneka ukuba ufuna nantoni na. Sithumele umyalezo ngokulula okanye ukhalise intsimbi yomnyango.
Siza kukuthumelela ikhowudi yokuvula umnyango ngexesha lokuhlala kwakho - akukho zitshixo! Ikhowudi iyatshintshwa phakathi kweendwendwe.
Siza kukuthumelela ikhowudi yokuvula…
Inombolo yomthetho: RHL-00993031